सुजातानिवासमा बैठक, कोइराला परिवारको विरासत... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
छापाबाट काठमाडौं, माघ ३
कांग्रेसमा कोइराला परिवारका तीन नेताले ‘विरासत’ फर्काउने उद्घोष गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक, सुजाता र डा. शेखरबीच मंगलबार भएको भेटमा पार्टीमा पुनः कोइराला परिवारको शक्ति फर्काउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
पछिल्लो केही दिनयता पौडेल, प्रकाशमान, सिटौला र केसीसहितका नेताहरू संवादमा छन्। यी नेताहरूले कोइरालाविरुद्ध अर्को समूह खडा गर्दा उनीहरूलाई थप असहजता हुनेछ। नेतृत्वमै दाबी गर्न पहिलो तीनमध्ये एकमा सहमति गर्न र दोस्रो देउवालाई टक्कर दिने गरी उपगुटलाई विश्वासमा लिन पनि कोइरालाहरूलाई सहज छैन। १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा लडेर नेता पौडेल पराजित भएका थिए। अब नेतृत्वकै लागि पौडेलले दाबी गर्ने विषय बाहिर आएको छैन। तर, नेता प्रकाशमान सिंहले कोइरालानिकटबाहेकका नेताको छुट्टै गुट बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको चर्चा कांग्रेसमा छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २, २०७४, ०६:२३:२८